आकर्षक मेट्रो स्टेशन अनि भूमिगत कला | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > आकर्षक मेट्रो स्टेशन अनि भूमिगत कला
पढ्ने समय:3मिनेट(Last Updated On: 30/10/2019)
मेट्रो स्टेशन मा भूमिगत कला नयाँ जस्तो देखिन्छ संग्रहालय मान्छे को. तिनीहरूले नयाँ-हेर्न पर्छ हुँदै गइरहेका छन् गन्तव्यहरू कला र डिजाइन उत्साही लागि. कसले सोचेको थियो? सबैभन्दा प्रेरक सार्वजनिक रिक्त स्थान केही, शामिल ठूलो मात्रा कला र डिजाइन धेरै शहर 'मेट्रो स्टेशन पाउन सकिन्छ. यसबाहेक, भूमिगत कला मेट्रो गर्न रंग को एक छप भन्दा बढी ल्याउन छ.
मेट्रो स्टेशन ridership र पर्यटन मा वृद्धि हेर्दै हुनुहुन्छ. त्यसैले, फलस्वरूप, तिनीहरूले समुदाय को एक अर्थमा वृद्धि हेर्दै हुनुहुन्छ.
यातायात मा कला पनि अन्य धेरै तरिकामा कमी गर्न सक्छ, जस्तै: हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, बर्बरता, र लोकल पट्टाइ! लाभ अनन्त हुन थाल्छ! जो हामी हाम्रो सबै भन्दा राम्रो रुचि साझेदारी गर्न उत्साहित छौँ किन छ भूमिगत कला – आकर्षक मेट्रो स्टेशन.
जीवन को गुणवत्ता परिवहन = गुणस्तर
एक अनुसार अध्ययन फ्रान्स गरेको शहरी विकास संस्थान गरेको. Parisians औसत मा खर्च 23 दिन परिवहन मा एक वर्ष. र यो अपवाद छैन. सबै दुनिया प्रयोग अधिक मान्छे सार्वजनिक यातायात काम गर्न रूपान्तरलाई.
तपाईंलाई थाँहा थियो: that studies have shown that the quality of transportation directly affects the quality of the lives of transit users? को यात्रा को अनुभव ट्रान्जिट द्वारा नै एक आकर्षण हुनुपर्छ. "सार्वजनिक कला एक ठाउँ को पहिचान बाहिर आकर्षित गर्न सक्छन्, एक छिमेकी र यसको बासिन्दा को ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्त्व को समझ सहायता। "
भूमिगत कला परियोजनाहरू पाउन सकिन्छ सबै दुनिया भर. मूर्तिहरु देखि, मोजाइकहरूमा, चित्रहरू. प्रतिष्ठानहरु जस्तै बडा उद्यम गर्न, नक्काशी, र reliefs. यहाँ हाम्रो रुचि को छन्.
भूमिगत कला – आकर्षक मेट्रो स्टेशन: स्टकहोम, स्वीडेन
यो तपाईं को केही गर्न एक आश्चर्य हुने छैन स्वीडेन भूमिगत कला अन्वेषण गर्न हाम्रो सूची मा पहिलो थियो. तपाईं स्वीडिश राजधानी मुनि हेर्न भने, तपाईं भूमिगत रेल लाइनको एउटा जटिल वेब पाउनुहुनेछ.
त्यहाँ बढी छन् 90 को 100 स्टेशन को 110km मा टनेल सिस्टम. "संसारको सबैभन्दा लामो कला रूपमा गर्न कहिलेकाहीं तिनीहरूले उल्लेख गर्दै ग्यालरी". तिनीहरूले चित्रहरु संग सजाया गरिएको छ, प्रतिष्ठानहरु, मोजाइकहरूमा, र द्वारा मूर्तिहरु 150 1950 देखि कलाकार.
यहाँ अचम्मको भूमिगत कला को केही तस्बिरहरू छन्
यी अद्भुत भूमिगत कला टुक्रा अन्वेषण गर्न प्रेरित महसुस? एक ट्रेन सेव तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन्! कुनै लुकेका शुल्क संग मिनेटमा एक रेल टिकट बुक!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/underground-art-subway-stations/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)